Fikaroham-bahaolana ifotony momba ny kariera Andilana Avaratra – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Fikaroham-bahaolana ifotony momba ny kariera Andilana Avaratra
Ankoatra ny fijerena ifotony nataon’ny Minisitra tao amin’ny kariera Andilana Avaratra, fihaonana nifanesy tamin’ireo ankolafin’ny mpisehatra maro nahitana an’Andriamatoa Governoran’ny Faritra Alaotra Mangoro Dr RAMANDEHAMANANA Richard, Andriamatoa RAKOTOMAHANDRY Thimoté Lehiben’ny Fileovana Ambatondrazaka , Andriamatoa Tsiry NOHARY Lehiben’ny Distrikan’Amparafaravola, ireo mpitandro filaminana OMC, ireo Solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tao amin’ireo Distrika rehetra tao anatin’ny Faritra Alaotra Mangoro, ireo Ben’ny tanana voafidy tao amin’ny Kaominina rehetra ao anatin’ny Distrika Amparafaravola, Mpikirakira sy mpividy vato, Tangalamena, tompon-tany sy tompon’ny lavaka Fifampidinihana hahafahana mampiditra ny vahoaka ao anatin’ny ara-dalàna sy hirindran’ny fandriam-pahalemana mba hahafahana manokatra izany kariera izany.
Harena iombonan’ny Malagasy rehetra ny harena an-kibon’ny tany ary rariny raha misitraka izany ny vahoaka Malagasy, araka ny nambaran’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA. Etsy andaniny, iaraha-mahalala fa ao anatin’ny tsy ara-dalàna ny asa fitrandrahana ataon’ny vahoaka ao Andilana Avaratra. Etsy ankilany, manatanteraka izany amin’ny fijerena ny ara-drariny ireo vahoaka, ka izany no tsy maintsy irosoana amin’ny fampidirana azy ireo ao anaty sehatra ara-dalàna. Tanjona ny fikatsahana ny hahazoana antoka ny tombontsoa sy tamberimbidy ary fampandrosoana ho entin’izany fitrandrahana izany ho an’ny rehetra.
Nanatanteraka fitsidihana tany amin’ny Faritra Alaotra Mangoro ny delegasion’ny Ministera foibe tarihin’ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy loharanon-karena stratejika Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA izay tonga nijery ny tena zava-misy marina ny 11 sy 12 Jona 2021.
Fiaraha-mikaroka ny vahaolana no natao, mba hahafahana mamoaka tondrozotra iray hitantanana iny asa fitrandrahana, miainga avy amin’ireo tolo-kevitra voaray. Isan’ny voaresaka tamin’izany ny :
– fananganana bokinandraikitra ho an’ireo mpitarika vondron’olona hiasa eny amin’ny Kariera ( filaminana, fahadiovana, fahandriampahalemana, teknikam-pitrandrahana,…)
– Fametrahana toerana iray hividianana vato
– Fanaraha-maso ny kalitao sy ny vidim-bato
Kasaina ny hanaovana fari-pitrandrahana filamatra ity kariera Andilana Avaratra ity mikasika ny famahana ny olan’ireo kariera vaky manerana ny Nosy. Nankasitraka ary samy naneho ny fahavononany hanohy ny fandraisana andraikitra izay aterak’izao fifanomezan-tanana eo amin’ny samy olom-panjakana izao ireo mpitondra any an-toerana.
← Fanaovan-tsonia fifanaraha-piaraha-miasa momba ny famaritana ny rambontany ambany ranomasin’i Madagasikara
TAHIRIM-BOLAMENA NASIONALY: Volamena 1Taonina sy 3 kilao no voangona ao amin’ny Banky Foiben’i Madagasikara tao anatin’ny efa-bolana →